Santa Barbara Beach & Golf Resort, Curaçao dia mandray ny talen'ny sakafo sy zava-pisotro vaovao
Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Santa Barbara Beach & Golf Resort, Curaçao dia mandray ny talen'ny sakafo sy zava-pisotro vaovao
Benchmark dia nanendry ny talen'ny sakafo sy zava-pisotro Amit Kumar Sen ho an'ny Santa Barbara Beach & Golf Resort, ilay mari-trano Benchmark Resorts & Hotels any Curaçao. Rob de Bekker, mpitantana jeneraly Benchmark ao amin'ny toeram-pialamboly no nanao io fanambarana io.
"Fahafinaretana toy izao ny mandray an'i Amit ho any amin'ny toeram-pialan-tsasatray sy amin'ny nosy Curaçao tsara tarehy," hoy Andriamatoa de Bekker. “Izy dia miaraka amin'ny fahaiza-mitarika manan-danja sy traikefa amin'ny fandrahoan-tsakafo azo tao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely fivahinianana any Etazonia sy Karaiba. Amit koa dia manome fahatakarana sy fankasitrahana lalina ny kolontsain'ity faritra ity. ”
Amit Sen dia mitondra indostria sy traikefa amin'ny tsena Karaiba amin'ny toerany vaovao miaraka amin'i Santa Barbara Beach & Golf Resort, rehefa nandefa ny asany momba ny sakafo sy ny fandraisam-bahiny tany Aruba. Vao haingana izy no nitana ny toeran'ny talen'ny fivarotana sakafo sy zava-pisotro ho an'ny Hyatt Regency any New Orleans, Louisiana, ary talohan'io dia talen'ny fisakafoanana ao amin'ny Gaylord Palms Resort Convention Center any Kissimmee, Florida. Andriamatoa Sen teo aloha dia nitana ny toeran'ny fisakafoanana sy fisotroana niaraka tamin'i Ritz Carlton, Marriott ary trano fananana voafantina tao Aruba.
Mahay amin'ny teny Anglisy, Hindi, Bengali ary resaka amin'ny teny Espaniôla sy Papiamento i Amit Sen, nahazo ny mari-pahaizana licence momba ny fitantanana hospitality avy amin'ny CHN - Leeuwarden, Netherlands, miaraka amin'ny University of Aruba. Nahazo ny mari-pahaizana momba ny Hotel & Restaurant Management avy amin'ny International Institute for Advanced Studies monina any India izy. Mipetraka any Curaçao Andriamatoa Sen ary hanaraka azy vetivety ny vadiny, izay teratany Aruba, sy ny zanany roa vavy.